#आउनुहोस्_हामी_सबै_जुटौं! #कसैलेपनि_भोकोबस्न_र_भोकै_मर्ननपरोस्_अभियान!! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
हिजोको स्टाटस अपडेट गर्न म एकैछिन अनलाईन छँदा मैले सामाजिक संजालमा धेरै ह्दयबिदारक तस्वीरहरू देखें। ति तस्वीरहरूले मलाई एकदमै डिस्टर्ब गर्यो ।
एकमन लाग्यो बेस्मारी गाली गरेर स्टाटस लेखौं । फेरि लाग्यो मैले गाली गर्दैमा यो अवस्थामा के परिवर्तन आउँछ र?लकडाउको बेला भोकै रहेका ने’पाली सम्झेर मलाई सुत्नेबेलासम्म निकै गार्हो भयो । उठेपछि पनि मैले यो बिर्सनै सकिन ।
यस्तो अवस्था धेरैको छ । मैले चाहेर मात्रै के गर्न सक्छु र? कतिलाई गर्न सक्छु र? यो तस्वीरहरूले मलाई निरन्तर सताई नै रह्यो।मान्छेले गर्ने भनेको परेको बेलामा र जि’उँदै छँदा हो । सधैं त कसले कसलाई गर्नसक्छ र? फेरि म मात्रै एउटा साधारण संचारकर्मी हुँ । म एक्लैले गरेर कतिलाई पुग्छ र?
आफ्नो तर्फबाट गर्ने स’हयोग नेपालमै दशकौं अघिदेखि निरन्तर गरिरहेको छु । त्यसका अतिरिक्त पनि बेलाबेलामा ब्यक्तिगत तवरबाट त गरिनै रहेको छु ।
सच्चीको साथमा कार्यक्रमको तर्फबाट बाजुराको अनाथ आश्रमको लागी ५ लाख ३५ हजार चानचुन (अहिले ठ्याक्कै सम्झिन) र श्रीमान द्वारा जलाएर मा’रिएकि कन्चन म’ण्डलको काखे बालक सम्झेर मन थाम्न नसकेर ९५ हजार उठाएर सहयोग गरेका थियौं । हुनत यस्ता अभियान दिनमा बिसौं चल्छन् र दिनेलाई पनि सकस भईसकेको अवस्था छ ।
सधैं यस्ता अ’भियान चलाएर भ्रष्टहरूलाई चॉहि भ्रष्टाचार गर्न दिईरहने र प्रवासिहरूले पैसा उठाएर पठाईरहने गर्नु हुँदैन र अन्तत सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो ब्यक्तिगत मान्यता छ ।
तैपनि आफै बिरामी भएको बे’लामा मैले यो पीडा भने जति बिर्सन कोशिस गरेपनि बिर्सनै सकिन त्यसैले आफ्नो आत्म स’न्तुष्टिको लागी नै भएपनि मैले सच्चीको साथमा कार्यक्रमको तर्फबाट १०० डलर बाट सुरूवात गरें र १००० डलर उठाएर पठाउने निधों गरे।
अब ९०० डलर उठेपछि यो पैसा हामी नेपाल पठाउने छौं र मात्रै अनि मात्रै आवश्यक परेको ठाउँमा खा’ना खुवाउने छौं ।
आफ्नो स्वेच्छाले कसैलाई यो अभि’यानमा सहभागी हुन मनलागे कृपया मलाई मेसेज गर्नुहोला वा क’मेण्ट बक्समा लेखिदिनुहोला ।
यो अभियान मात्रै ३ दिन रहनेछ । यो अभियानको लागी म आफुले सकेको बेलामा अनलाइन बसि मेसेजहरू चेक गरिरहनेछु । कसैलेपनि_भोकोबस्न_र_भोकै_मर्ननपरोस्
Previous एउटा न एउटा भि’जन त तयार पार सरकार, यो अबस्थामा पनि किन मौ’न ??
Next ए मालिकहरु सु’न्दै छौ ! तिमीहरुलाई लाग्छ होला मैले पालेको छु र खान पाएका छन् ।